Download : Mac | Internet Journal
NewsLocalInternationalElectronicsPromotionProductReviewLaptopsTabletsMobileGamesCarsDownloadiosAndroidWindows PhoneWindowsMacHow ToComputerMobileWebPlusArticlesInterviewWord Of The DayApp Of The Day Home » You are hereDownload » Mac	Download : Mac Fireebook Duplicates Finder Friday, 11 Dec 2015 Mac OS သုံးစွဲသူများအတွက် Firebook Duplicates Finder app သည် ကွန်ပျူတာစနစ်အတွင်းရှိ အမျိုးအစားတူညီသည့် ဖိုဒါများ ဖိုင်များကို ရှာဖွေကာ ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပေးနိုင်မည့် ဆောဖ့်ဝဲတစ်ခုဖြစ်သည်။
[ > ] ImageVectorizer Friday,6Nov 2015 ImageVectoriezer app သည် Mac OS သုံးစွဲသူများအတွက် ဓာတ်ပုံများကို Vector file အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးနိုင်မည့် ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခု ဖြစ်သည်။
[ > ] Translate! Teacher Friday, 23 Oct 2015 Translate! Teacher ဆော့ဖ်ဝဲသည် နိုင်ငံခြားဘာသာစကားကို လေ့လာသင်ယူနေသူများအတွက် အသုံးဝင်မည့် ဆော့ဖ်ဝဲ တစ်ခုဖြစ်သည်။
[ > ] Battery Guru Friday, 16 Oct 2015 Mac OS အသုံးပြုသူများအတွက် Battery အသုံးပြုမှုကို စိစစ်ပေးနိုင်မည့် ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခု ဖြစ်သည်။
[ > ] Adware Cleaner Friday,9Oct 2015 Adware Cleaner ဆိုသည့် ဆော့ဖ်ဝဲသည် Mac OS တွင် အသုံးပြုသည့် ကွန်ပျူ တာ Browser များပေါ်တွင် Adware များကပ်ငြိမှုကို ဖယ်ရှား ရှင်းလင်းပေးနိုင်မည့် ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခု ဖြစ်သည်။
[ > ] Malwarebytes Anti-Malware Friday,2Oct 2015 Malwarebytes Anti-Malware ဆိုသည့် ဆော့ဖ်ဝဲသည် Mac OS အသုံးပြုထားသည့် ကွန်ပျူတာများအတွင်းတွင် Malware များ၊ Trojan များ အစရှိသည်တို့ကို ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပေးနိုင်မည့် ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခု ဖြစ်သည်။
[ > ] Airdroid for Mac Friday, 18 Sep 2015 Mac OS အသုံးပြုထားသည့် ကင်မရာပေါ်မှ Android Device များသို့ USB Cable နှင့် ချိတ်ဆက်ရန်မလိုဘဲ Wireless ဖြင့် ချိတ်ဆက်နိုင်မည့် ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဖြစ်သည်။
[ > ] Easy Find for Mac Friday, 11 Sep 2015 Mac OS အတွင်းရှိ ဖိုင်များကို ရှာဖွေနိုင်မည့် ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခု ဖြစ်သည်။
[ > ] MiniTool Photo Recovery for Mac Friday,4Sep 2015 Mac OS ပေါ်တွင် ပျောက်ဆုံးသွားသည့် ဓာတ်ပုံများကို ပြန်လည်ရှာဖွေ ပေးနိုင်မည့် ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခု ဖြစ်သည်။
[ > ] Malwarebytes Anti-Malware for Mac Friday, 28 Aug 2015 Malwarebytes ဆိုသည့် ဆော့ဖ်ဝဲသည် Mac OS အသုံးပြုထားသည့် ကွန်ပျူတာအတွင်းတွင် malware နှင့် adware များ ဝင်ရောက်မှုကို ကာကွယ် တားဆီးပေးနိုင်မည့် ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခု ဖြစ်သည်။
[ > ] Pages123456next ›last » Editorial Email : ijeditorial@informationmatrix.com